I-Cariton Retreat-Sele, ukuzola, isithuba
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguStephen
UStephen ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uStephen iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
ICariton Retreat ikwikona ezolileyo yembonakalo entle eqengqelekayo yeGers. Yikhilomitha enesiqingatha ukusuka kwilali entle yamaxesha aphakathi yaseMontreal Du Gers. Indlu inezixhobo ezihlaziyiweyo kulo nyaka ngeempawu ezithandekayo zakudala.
Onke amagumbi ethu okulala ahonjiswe kakuhle ngemigangatho yamaplanga, iibhedi ezitofotofo kunye nemibono emangalisayo phezu kwezidiliya ezingqongileyo. Igadi enkulu inedama leemitha ezili-12.
Iindwendwe zinendlu yonke yasefama zodwa, sihlala kwindlu edibanayo.
Amagumbi abandakanya ikhitshi elinefriji / isikhenkcezisi, isinki, isitovu, ioveni, izixhobo zasekhitshini, izixhobo zokuhombisa kunye nezitya. Kukwakho negumbi lokutyela elikhulu elinetafile yokutyela ye-oki yabantu abasibhozo kunye nendawo yokuhlala ejikeleze isitovu samaplanga. Elona gumbi likhulu lineendonga zamatye ezingenanto kwaye likhulu ngokwaneleyo ukuba likwazi ukuhlalisa iiseshini ze-yoga eziqhelekileyo eziphantse zibe ziimitha ezingama-20 ubude, zineprojekti yevidiyo ngoko kunokwenzeka ukwenza icinema yasekhaya apha. Ikhokelela kwithasi enetafile enkulu kunye netafile encinci enemibono emangalisayo phezu kwezidiliya ezijikelezileyo.
Sinesihlalo esiphezulu, iincwadi kunye nemidlalo yeendwendwe ezincinci kunye nezixhobo ze-juggling kunye ne-yoga kubantu abadala.
Igadi igubungela ihektare kwaye ichibi elikhulu leemitha ezili-12 elineshawari lingqongwe yingca kunye nemithi ye-oki kwaye ineendawo zokuhlala ezisi-8 zelanga. Sine-trampoline enkulu yeemitha ezi-4 kunye nebha yokutsala egadini. Sikwanayo neyurt enkulu efumaneka xa uyicela.
Igumbi lokulala eli-1-Chêne Chambre (Igumbi le-Oak)
Igumbi lokuqala phezulu kwipaseji ekufutshane negumbi lokuhlambela elisezantsi kunye negumbi langasese lokuqala, elineseti ezimbini zeefestile, isitya sezandla kunye newodrophu. Ngeebhedi ezimbini.
Igumbi lokulala 2-Marronnier Chambre (Igumbi leChestnut)
Igumbi lesibini ecaleni kwepaseji, kwakhona kufutshane negumbi lokuhlambela elikhulu, kunye negumbi langasese lokuqala. Inokucwangciswa njengento ephindwe kabini okanye iwele. Ngewodrophu kunye nolunye ugcino.
Igumbi lokulala 3-Saule Chambre (Igumbi leWillow)
Neebhedi ezimbini kunye nendawo yokugcina. Umgangatho wokuqala igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese efikeleleka lula.
Igumbi lokulala 4-Ukuba iChambre (Igumbi leYew)
Igumbi lokugqibela ecaleni kwepaseji ekunokwenzeka ukuba lelona lithuleyo, eli gumbi linebalcony emangalisayo kwi-treetops enendawo yokuhlala ekhululekileyo kubantu abayi-2-4 kufutshane negumbi lokuhlambela elinendlu yangasese. Ikwabonisa i-wardrobe epheleleyo. Inokucwangciswa njengento ephindwe kabini okanye iwele.
Le ndlu ijikelezwe zizidiliya kunye neefama ezinembono eziya ePyrenees ngeentsuku ezithile. Iindlela ezizolileyo kunye neendlela zendawo zifanelekile ukuhamba okanye ukuhamba kancinci.
IMontreal Du Gers ithe ngcu kwindawo enamatye kumgama wemizuzu eli-15 uhamba kwizidiliya kunye namasimi asuka eCariton. Inendawo entle yedolophu kwaye uninzi lwayo lususela kumaxesha aphakathi. Yenye yeedolophu ezintle zaseFransi ezidweliswe kwiilali zase-Plus beaux zaseFrance. Ukuba kwiChemin de Santiago kwamkelekile kakhulu kubantu bangaphandle kodwa ikwayilali encinci ezolileyo. Inezixhobo ezininzi zotyelelo lwakho:
Iofisi enkulu yabakhenkethi eneenkcukacha zemisitho yasekhaya kunye nezinto ezinomtsalane, ngakumbi izidiliya zasekhaya uninzi lwazo zivulekele ukungcamla.
Indawo yokubhaka - i-boulangerie enoluhlu lwezonka eziphilayo kunye ne-patisserie
I-delicatessen, i-Avec Plaisir ene-organic veg, itshizi kunye neziselo.
Ivenkile eluncedo - Proxi
Igaraji - nge 24 iiyure self-service
Ugqirha (othetha isiNgesi)
Iimitha ezingama-600 ukusuka eCariton iChemin de Santiago yindlela yokundwendwela ephakathi elandelwa ngamakhulu amawaka ngeenyawo namhlanje.
Seviac yaseRoma villa
Iikhilomitha ezi-2 ukusuka eCariton kunye neyona mizobo mihle yaseRoma kuMazantsi eFransi. Oku kusandul 'ukuvulwa kwakhona kunye ne-architect eyilwe kwi-pavillion ukukuthulisa ukwenza ilanga.
I-7km ukusuka eCariton yilali encinci entle kakhulu yamaxesha aphakathi ejikeleze umthi ojikelezayo oluhlaza kunye neegalari ezithandekayo zobugcisa, iindawo zokutyela, iivenkile zokutya kunye neevenkile ezithengisa iwayini, ezinye iziselo kunye nezipho zokutya.
Iikhilomitha ezili-10 ukusuka eCariton yiLaressingle, ilali efana nenqaba eneendawo zokutyela ezimbini ezinkulu kumabala amahle.
Sihlala kwindlu edibeneyo kwaye siya kufumaneka ukuze sincede kuyo nayiphi na imibuzo enokuthi ivele.